I-Afro Soul ithole ikhaya elisha eMgungundlovu | News24
I-Afro Soul ithole ikhaya elisha eMgungundlovu
ISITHOMBE:nokulunga ngobese USabelo Ngema, Themba Njilo, Thandeka Zulu no-Sergeant Malishe abangamalungu e-Afro Soul ngenkathi Uhologo Music Production ulamukela ngokusemthethweni leli qembu ngaphansi kwesitebele salo ngoLwesihlanu olwedlule.
EMVA kokunyamalala endimeni yezomculo iqembu lase Thekwini i-Afro Soul isizitholele ikhaya elisha ngaphansi koHologo Music Production oluholwa ngusomabhizinisi owaziwayo eMgungundlovu uMnu Themba Njilo.
Leli qembu eliholwa amalunga amathathu, okungoSergeant Malishe, Thandeka Zulu no Sabelo Ngema lamukelwe ngokusemthethweni ngaphansi kwalesi sitebela ngoLwesihlanu olwedlule emahhovisi eThemba Njilo Foundation. Leli qembu elineminyaka engu-15 lasungulwa linama –albhamu amathathu ngaphansi kwegama lalo, okubalwa Um-Afrika, Usemncane neRebirth. Kuwo womathathu la ma-albhamu like laqokwa njengeqembu elivelele emculweni we–Afro pop abakwa South African Traditional Music Awards (Satma) nge-albhamu yalo ethi Rebirth ngo 2013, ngo 2010 i-albhamu yalo ethi UmAfrika yaqokwa njengevelele kumaSouth African Music Awards (Sama), kanti ngo-2009 yona le albhamu yadla umhlanganiso kuma Metro FM awards. Emva kokuqopha nezitebele ezehlukene okubalwa kuzo ne-KZN Music House okuyilapho begcine khona ukuqopha, leli qembu libe selikhetha ukuzimela. UMalishe uthe yize beneminyaka basungulwa bahlangabezane nezingqinamba eziningi ebezibavimba ukuthi bathuthuke.
“Emva kocwaningo olunzulu sibheka umuntu esinesiqiniseko ukuthi uma singakhosela ngaphansi kwekhwapha lakhe singakhula, sivumelene ngobaba uNjilo. Lokhu sikusho ngoba besiyilandelela impilo yakhe njengoba ewumuntu onothando lokusiza umphakathi nokuthuthukisa amaciko.
“Njengoba esegcine esamukelile ekhaya lakhe, siyathembisa ukuzikhandla nokusebenzisana ngeqiniso.”
UNgema ugcizelele ukuthi ngenxa yezingqinamba eziningi abadlule kuzona besekufanale ngabe sebephonse ithawula, kodwa ngenxa yokuthi banentshisekelo yokuphokophela phambili bathe abavuke bazithathe.
UNjilo uthe uyakujabulela kakhulu ukusebenzisana naleli qembu, njengoba kungokokuqala ngqa esebenzisana nabaculi bomculo we–afro pop.
“Isikhathi esiningi kwaziwa ukuthi ngisebenzisana nabaculi bezokholo, kodwa manje sekuzojika izinto.
“Nami ngimangele uma bengitshela ukuthi bafisa ukusebenzisana nami ngoba babone ukuthi ilapho bengathola khona ukukhula ngokomsebenzi wabo.
“Umsebenzi wokuthuthukisa amaciko into esondelene kakhulu nenhliziyo yami. Ngiyabamukela futhi ngiyathemba sizosebenzisana kahle, futhi ngiyathemba ukuthi bazozikhandla ngoba angisebenzisani namavila,” kusho uNjilo.
Leli qembu kulindeleke ukuthi libe ngelinye lamaqembu nabaculi abazonandisa ekhonsathini yomculo ezoba ngoMgqibelo ngenhloso yokukhulisa isikhwama se-Themba Njilo Foundation e-Alexandra Park kusukela ngo 10 am.